Isicelo - Chengdu Region Technology Co., Ltd.
1.Facade lezinyosi kwesihenqo
Indlela evulekile nevaliwe yekhethini lekhekheba lezinyosi lingahlukaniswa libe phezulu, phansi, phezulu nangaphansi, futhi ukwakheka kwamakhethini kungavalwa kusuka ezansi phezulu noma ukusuka phezulu kuye phansi, kepha futhi kungahlala kuphakathi kwanoma yisiphi isikhundla, ukuze kuzuzwe ikhava yelanga njengoba uthanda. Ngaphezu kwezitayela ezijwayelekile, imiklamo yamakhethini emini nasebusuku ihlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokukhanya nobumfihlo emini noma ebusuku ngokuhlanganisa amakhethini wokuhambisa ukukhanya amabili ahlukene. Izitayela ezahlukahlukene ezingenhla zamakhethini esidleke se-facade nazo zingangezwa ku-motor drive encane ye-DC, ngedivayisi yokulawula isivinini ukwenza i-coaxial reel ikhiqize ukujikeleza, idonse intambo yokuphakamisa phezulu naphansi, ifinyelele ekuvuleni nasekuvalweni kwekhethini. Isakhiwo sayo esiyingqayizivele sedivayisi enomkhawulo ukuze imininingwane ehlukile yemikhiqizo ikwazi ukubeka kahle phansi naphansi, ngenkathi imoto isesimweni sokuvimba lapho ugesi unqanyulwa ngokuzenzakalela ukuze imoto ingalimali ngokuvimba. Ikhethini lesidleke lilungele izimo ezahlukahlukene, noma ngabe igumbi lokuhlala, iwindi lokulala, noma iwindi elenziwe ngokungajwayelekile, ikhethini lezinyosi lezinyosi lingalawulwa. Ingasetshenziswa futhi ngamakhethini endwangu, womabili ukupholisa ukuvimbela umsindo ngenkathi kugcinwa ubuhle bamakhethini alenga wendabuko.
2.The phezulu skylight lezinyosi ikhethini Skylights
amafasitela ophahla oblique, zonke izinhlobo zama-sunroofs, zonke izinhlobo, ngisho nophahla olugobile lungaxazululwa ngokuphelele ngamakhethini ezinyosi zezinyosi.
Sikhiqiza indwangu ephothiwe yekhethini lezinyosi, ukukhethwa kwendwangu ephothiwe yekhwalithi ephezulu, impilo ende, ukumelana nelanga hhayi ukusonteka; Khetha i-Pur hot melt bonding, ukumelana nokushisa okuphezulu okungaphezu kuka-120 degrees C, ukumelana nesimo sezulu kungcono kakhulu kune-polyester noma i-polyamide melt hot.
3.Ikhethini lezinyosi lokuhambisa ukwahlukanisa komnyango